Enye indlela ye-Periscope yango-2021
Uyemukelwa kuFlirtymania - umphakathi wevidiyo obukhoma
I-Flirtymania iyindlela ekahle ye-periscope ongayisakaza bukhoma futhi wabelane ngeminye imidiya nabasebenzisi!
Ku-Flirtymania, ungabuka noma yikuphi okuqukethwe ngokungaziwa futhi ubhalise kuphela uma ufuna ukuthumela okuqukethwe kwakho
Sebenzisa ngokugcwele isikhathi sakho ku-Flirtymania ngezitika ezihlekisayo zazo zonke izimo zemizwa nomcimbi. Lena enye indlela engcono kakhulu ye-periscope yokunonga izingxoxo zakho, ezomuntu siqu neziyimfihlo, ngalezi zitikha ezijabulisayo nezijabulisayo. Valelisa ezingxoxweni zakho eziyisicefe futhi ulungele izingxoxo ezimangalisayo!
I-Flirtymania ikulethela enye indlela yokusakaza bukhoma engcono kakhulu ye-periscope nenkundla yayo ekhethekile ebizwa ngokuthi i-U LIVE. Ungathola amakhulukhulu okusakazwa bukhoma okuhlukile nokusakazwa komthamo wakho wansuku zonke wokuzijabulisa! Ngaphandle kwalokhu kusakazwa bukhoma okungapheli, ungaphinda uhlole izithombe namavidiyo avela kubadali bokuqukethwe abaningi ku-Flirtymania.
Ngabasebenzisi abavela emazweni angaphezu kuka-80, i-Flirtymania ikulethela ithuba lokuhlangana nabantu abasha abavela emhlabeni wonke. Thola amantombazane ashisayo futhi wenze abangani abasha ku-inthanethi ngesisekelo sethu esikhulu sabasebenzisi bomhlaba wonke. Ungazama amakhono akho namantombazane avela emazweni ahlukene futhi nijabulele nalawo othanda kakhulu!